The Taking of Pelham 123(2009) | MM Movie Store
နယူးယောကျမွို့မှာ လူသုံးအမြားဆုံး သယျယူပို့ရေးလမျးကွောငျးက မွအေောကျရထားစနဈပဲဖွဈပါတယျ။အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျး ဒီလိုရထားတှဟော အခြိနျတိကတြဲ့အပွငျ ကားစီးပွီးသှားတာထကျတောငျ လိုရာခရီးကို ပိုပွီးမွနျမွနျဆနျဆနျရောကျနိုငျပါတယျ….
ဒီဇာတျကားထဲမှာတော့ ဝျေါတာ ဂါဘာ ဟာ ဒီလိုမြိုး မွအေောကျရထားတှကေို အန်တရာယျကငျးစှာသှားလာနိုငျဖို့အတှကျ….ထိနျးခြုပျရေးစငျတာကနေ ညှနျကွားခကျြတှပေေးရတဲ့သူဖွဈပါတယျတဈရကျမှာတော့ Pelham 123 ဆိုတဲ့ ရထားတဈစီးကို လကျနကျကိုငျအဖှဲ့တဈဖှဲ့က အနုကွမျးဝငျစီးပွီး ရထားပျေါကခရီးသှားတှကေို ဓားစာခံအနနေဲ့ဖမျးထားတဲ့အခါ ….
ဂါဘာ လညျး ဒီအကွမျးဖကျအဖှဲ့နဲ့ ညှိနှိုငျးရာကနေ ဒျေါလာ ၁၀ သနျး နဲ့ ၁ နာရီအတှငျးလဲဖို့ ကမျးလှမျးလာပါတော့တယျ…. ဒီဇာတျကားမှာ နာမညျကြျောမငျးသားကွီး ၂ ဦးဖွဈတဲ့ Denzel Washington နဲ့ John Travolta တို့ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့အပွငျ…
ဒါရိုကျတာ Tony Scott ကိုယျတိုငျ US ဒျေါလာ သနျး ၁၁၀ ကြျော သုံးစှဲပွီး ရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျလမျးကောငျးတဈပုဒျဖွဈတဲ့အတှကျ ပရိတျသတျမြား ခံစားကွညျ့ရှုနိုငျစဖေို့ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျခငျဗြာ…..
နယူးယောက်မြို့မှာ လူသုံးအများဆုံး သယ်ယူပို့ရေးလမ်းကြောင်းက မြေအောက်ရထားစနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ဒီလိုရထားတွေဟာ အချိန်တိကျတဲ့အပြင် ကားစီးပြီးသွားတာထက်တောင် လိုရာခရီးကို ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်နိုင်ပါတယ်….
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ ဝေါ်တာ ဂါဘာ ဟာ ဒီလိုမျိုး မြေအောက်ရထားတွေကို အန္တရာယ်ကင်းစွာသွားလာနိုင်ဖို့အတွက်….ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာကနေ ညွှန်ကြားချက်တွေပေးရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တစ်ရက်မှာတော့ Pelham 123 ဆိုတဲ့ ရထားတစ်စီးကို လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က အနုကြမ်းဝင်စီးပြီး ရထားပေါ်ကခရီးသွားတွေကို ဓားစာခံအနေနဲ့ဖမ်းထားတဲ့အခါ ….
ဂါဘာ လည်း ဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့နဲ့ ညှိနှိုင်းရာကနေ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း နဲ့ ၁ နာရီအတွင်းလဲဖို့ ကမ်းလှမ်းလာပါတော့တယ်…. ဒီဇာတ်ကားမှာ နာမည်ကျော်မင်းသားကြီး ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ Denzel Washington နဲ့ John Travolta တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့အပြင်…
ဒါရိုက်တာ Tony Scott ကိုယ်တိုင် US ဒေါ်လာ သန်း ၁၁၀ ကျော် သုံးစွဲပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ပရိတ်သတ်များ ခံစားကြည့်ရှုနိုင်စေဖို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ…..